Siyaasadda Khaaska ah | Martech Zone
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah ama aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan siyaasadeena asturnaanta, fadlan si xor ah u nala soo xiriir. At Martech Zone, asturnaanta booqdayaashayadu muhiimad gaar ah ayey noo leeyihiin. Dokumentigan siyaasadeed ee asturnaanta wuxuu qeexayaa noocyada macluumaadka shakhsiyeed ee la helo oo la soo ururiyo Martech Zone iyo sida loo adeegsado.
Sida boggag kale oo badan, Martech Zone wuxuu adeegsadaa faylasha qoraalka. Macluumaadka ku jira faylasha diiwaanka waxaa ku jira cinwaanada borotokoolka (IP), nooca biraawsarka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), taariikhda / waqtiga shaambada, bogagga tixraaca / bixitaanka, iyo tirada qasabno si loo falanqeeyo isbeddellada, maamul goobta, la soco dhaqdhaqaaqa isticmaalaha agagaarka goobta, oo soo ururi macluumaadka dadka. Cinwaanada IP, iyo macluumaadka kale ee noocaas ah kuma xirna wax macluumaad ah oo shaqsi ahaan la aqoonsan karo.
Martech Zone adeegsadaa cookies si loogu kaydiyo macluumaadka ku saabsan dookha booqdayaasha, diiwaanka macluumaadka isticmaalaha gaarka u ah ee boggaga adeegsadaha marin u helo ama booqdo, astaysto bogga Websaydhka ku saleysan martida nooca biraawsarka ama macluumaadka kale ee soo booqdaha ku diraayo biraawsarkooda.
Google, oo ah iibiyaha dhinac saddexaad, wuxuu adeegsadaa cookies si loogu adeego xayeysiiska Martech Zone.
Adeegsiga Google ee cookie-ka DART wuxuu awood u siinayaa inay ugu adeegto xayeysiis isticmaaleyaasha iyadoo lagu saleynayo booqashadooda Martech Zone iyo baraha kale ee internetka.
Isticmaalayaasha way ka bixi karaan adeegsiga cookie-ka 'DART' iyagoo booqanaya xayeysiiska iyo waxyaabaha ku jira Google siyaasadda asturnaanta shabakadda
Qaar ka mid ah la-hawlgalayaashayada xayeysiinta ayaa isticmaali kara kuukiinka iyo nalalka shabakadda ee boggeena. Wada-hawlgalayaashayada xayeysiinta waxaa ka mid ah Google Adsense, Commission Junction, Clickbank, Amazon iyo kuwa kale ee gacansaarka la leh iyo kafaala qaadayaasha.
Martech Zone marin uma laha ama ma xakamayn karo buskudyadan ay adeegsadaan xayeysiiyaasha-saddexaad.
Waa inaad la tashataa siyaasadaha gaarka ah ee khuseeya adeegyadan xayeysiiska ah ee dhinac saddexaad si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhaqankooda iyo sidoo kale tilmaamaha ku saabsan sida looga baxo ficillada qaarkood. Martech ZoneQaanuunka arrimaha khaaska ah ma khuseeyo, mana xakamayn karno dhaqdhaqaaqa, xayeysiistayaasha kale ama bogagga internetka.
Haddii aad doonayso inaad gab cookies, si aad u samaysaan si aad fursadaha browser shaqsi. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maareynta cookie la daalacashada web gaar ah waxaa laga heli karaa website-yada kala ah daalacashada '.